ATSC 3.0: လုပ်ခြင်းအတွက်တော်လှန်ရေးအလားအလာ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery » ATSC 3.0: အဆိုပါရာတွင်တော်လှန်ရေးကောင်စီနိုင်သည့်အလားအလာ,
ATSC 3.0: အဆိုပါရာတွင်တော်လှန်ရေးကောင်စီနိုင်သည့်အလားအလာ,
Greg Jarvis, Fincons အမေရိကန်မှာအမှုဆောင်ဒုသမ္မတနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာ
သူတို့ Hybrid ကိုတီဗီများ၏အလားအလာစူးစမ်းဖို့နဲ့သူတို့ကိုအနေနဲ့အစဉ်အဆက်ကပိုတွင် ပို. ပို. အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာကူညီရန်မူတည်ပြီးမှ tools များ၏တစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကိုခင်းကျင်းရှိကိုရှာဖွေအကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်းထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ခေတ်သစ်အတွက်အမေရိကန်ကွင်းထဲတွင် ATSC 3.0 စံ၏ထွန်း လူစည်ကားဈေးကွက်။ ချိတ်ဆက်တီဗီနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. တိုင်းရင်းဆေး Over-the-air ထုတ်လွှင့်ကြောင်းယနေ့ကြည့်ရှုရန်နေသားတကျဖြစ်လာကြပါပြီရွေးချယ်မှုမိတ်ဆက်နေဖြင့်အသစ်အထွဋ်မှရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်၏ရိုးရှင်းလှုပ်ရှားမှုတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်ပါသည်။ HbbTV ယခုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုများအတွက်စံခဲ့ရှိရာဥရောပအတွေ့အကြုံ, Hybrid ကို TV ကနေတဆင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်သို့၎င်းတို့၏လက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့ရိုးရာထုတ်လွှင့်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်အောင်မြင်သောဥပမာများများပေးသည်။
နားလည်တတ်ကျွမ်းထုတ်လွှင့်, cable ကိုကွန်ရက်များနှင့်ပင်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများရရှိအများကြီးရှိသည် ဖြစ်. , လူမှုရေးမီဒီယာကနေဂိမ်းတွေ consoles စဖို့သူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့ယှဉ်ပြိုင်ပလက်ဖောင်းများ၏အကွာအဝေး, ရှိနေသော်လည်းစားသုံးသူနေဆဲ TV1 စောင့်ကြည့်နီးပါးနှစ်နာရီတစ်ရက်ဖြုန်းနေကြတယ်။ အမေရိကန်လူဦးရေရဲ့ 10% န်းကျင်နေဆဲရုပ်သံလိုင်းကနေရုပ်သံလိုင်းမှတောက်နေဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားကိုစားသုံးကြသည်။ အစဉ်အလာကို TV မသက်ဆိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းများအနေဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း, ကြော်ငြာများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအလတ်စားဖြစ်နေဆဲအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ သာ. ကြီးမြတ်အသုံးစရိတ်တန်ခိုးနှင့်အဟောင်းများကြည့်ရှုထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ဖို့ကပိုများပါတယ်, ဒါကြောင့်အစဉ်အလာထုတ်လွှင့်ဌာနကို vs ရိုးရှင်းတဲ့ binary OTT ရိုးရှင်းစွာအတှဲကြည့်ရှုသူဝယ်လိုအားပြန်ပါလာမည်မဟုတ်ပါဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင်းကိုဤထည့်ပါ။
စားသုံးသူများ (နှင့်ထို့ကြောင့်ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်၏ကြီးမြတ်သောဝေစု) မှရေရှည်သစ္စာရှိမှုနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုကိုသေချာစေရန်, ထုတ်လွှင့် ATSC 3.0 သော့ဖွင့်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏အားသာချက်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်တှငျကြှနျုပျတို့ကိုအမေရိကန်တီဗီအကြောင်းအရာပေးပို့နှင့်စေးကပ်နဲ့ကြော်ငြာအလားအလာအပေါ်သူတို့ရဲ့အလားအလာအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အနာဂတ်ပုံဖော်ထိပ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်အလင်းကိုသွန်း။
1 ။ ပစ်မှတ်ထားအကြောင်းအရာ
ကြည့်ရှုသူဦးစားပေးနားလည်ခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်ထား switching minimize နှင့်ချန်နယ်စေးကပ်တိုးတက်စေရန် drive ကိုအတွက် ပို. ပို. အရေးကြီးသောဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ တူညီသော channel မှာကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းတစ်ခုမှာတန်ဖိုးရှိသောနည်းလမ်းများအထူးကြည့်ရှု '' အရသာမှပစ်မှတ်ထားအကြောင်းအရာအတိုအထွာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ပြီးသား OTT ပံ့ပိုးပေးသဖြင့်အသုံးပြုမှုအတွက်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ဒါသိသာနည်းပညာန့်အသတ်ကြောင့်အစဉ်အလာကို TV ပေါ်မှာကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ Snipes နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကို programming စဉ်အတွင်းမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ပေါ်လာကြောင်း - ထိုသို့သောလာမည့်ဇာတ်လမ်းတွဲလေဦးမည်ရက်စွဲအဖြစ် - ယခုအဆင့်မြှင့် ပို. အစွမ်းထက်စေနိုင်ပါတယ်; Next ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတီဗီထုတ်လွှင့်နှင့်အတူတဦးတည်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုရှိုးသို့မဟုတ် viewer ရဲ့ပုံမှန်ဦးစားပေးအပေါ်အခြေခံပြီးအလိုအလျှောက်ရွေးချယ်ထားသည့်ပင်အလားတူစီးရီးပြီးနောက်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွဲမြှင့်တင်အဆုံးသတ်မှကြွလာသောအခါပေါ်လာကြောင်းပေါ့ပ်အထဲကကြော်ငြာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
2 ။ Adressable Advertising ကြော်ငြာ
Hybrid ကို TV ကလည်းအရေးကြီးအမှန်တကယ်လျာထားသောကြော်ငြာခြင်း၏အလားအလာလွှတ်။ ကြော်ငြာ၏ဤအမျိုးအစားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ဦးချင်းအိမ်ထောင်စုပေါင်းမှသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါခွင့်ပြု, ပင်အတူတူပင်အိမ်ထောင်စုအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောကြည့်ရှုသူများအတွက်ကြော်ငြာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်, လစျြလြူရှုကြည့်ရှုအပေါ်ဟဿဖြစ်သွားသောအားထုတ်မှုကိုလျှော့ချ။ ဒါကပရိသတ်သန်းပေါင်းများစွာရောက်ရှိနိုင်သည့်အောက်တွင်-အသုံးပြုသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်, အမေရိကန်အတွက် 120 သန်းတီဗီနေအိမ်များ၏ထက်ပို 65 သန်း, တစ်ဦးအိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦးလိပ်စာ ad.2 တစ်ခုချင်းစီနေထိုင်သူသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ် လိုက်. ကြော်ငြာကိုလက်ခံရရှိနိုင်ခံယူဖို့နည်းပညာရှိတယ်
ကျား, မ, တည်နေရာ, အကျိုးစီးပွားနှင့်အပြုအမူ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ဥပမာ, ဘယ်မှာ HbbTV စံ Channel ကို 10 စုစုပေါင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝင်ငွေ 3% ကအားလုံး 80 ဟုခေါ်တွင်သည်၎င်း၏ဗီဒီယို On-demand ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ရောင်းချလိပ်စာကြော်ငြာများမှ လာ. ,4years44 များအတွက်စံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
3 ။ Geo-ပစ်မှတ်ထား
ပစ်မှတ်ထားနှင့်လိပ်စာကြော်ငြာကိုလည်းကြော်ငြာကိုလက်ခံရရှိသည့်ပရိသတ်များအတွက်ဂရုတစိုက်သိပ်တည်နေရာကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ ဒီအားသာချက်ကိုယူတော်မူကြောင်းကိုတစျခုမှာကုမ္ပဏီကဇိမ်ခံကားအမှတ်တံဆိပ် Maserati ဖြစ်ပါတယ်။ ကနယ်ပယ်ထုတ်ကုန်သည်အတိုင်း, ကြည့်ရှု၏ကျယ်ပြန့်အရေအတွက်အားထိမှန်ကြောင်းရိုးရာတီဗီလှုပ်ရှားမှုများအရင်းအမြစ်များကြီးမားတဲ့စွန့်ပစ်ကြသည်။ လိပ်စာကြော်ငြာ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ခုတည်းကိုသာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်အနီးနေရာများတွင်၌၎င်း, အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ပစ်မှတ်ဝယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပရိသတ်တွေမှဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်။ 2018 ခုနှစ်, Maserati ပစ်မှတ်ထားတီဗီနည်းပညာ၏အကူအညီဖြင့်၎င်း၏ပထမဆုံးအမျိုးသားရေးဗြိတိန်တီဗီကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ကင်ပိန်း၏အရှည်တစ်လျှောက်လုံးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်မှလာရောက်လည်ပတ်သူခြေရာခံ, နောက်ထပ်ဒေတာစုဆောင်းနှင့် analysis.5 ဖွင့်
တည်နေရာဒေတာကိုလည်းရှိုးများအကြားပေါ့ပ်တနေရာမှတဆင့်စစ်မှန်သောအချိန်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာရာသီဥတုမွမ်းမံမှုများသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာသတင်းပေးဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကြည့်ရှုရုပ်သံလိုင်း switching တား, တစ်နေရာတည်းတွင်သူတို့အကြိုက်ဆုံးပြပွဲနှင့်အသုံးဝင်သော, သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ရယူနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်ထုတ်လွှင့်ဖို့သစ္စာရှိမှုခိုင်မာရေးနေချိန်မှာဒီလမ်းအတွက်ကြည့်ရှုဆက်ပြီး, ကြော်ငြာရှင်များ '' ဘတ်ဂျက်၏ပိုကြီးရှယ်ယာဆုပ်ကိုင်ဖို့ကူညီပေးသည်။
4 ။ interactive Advertising ကြော်ငြာ
ရိုးရာကြော်ငြာမဟုတ်ဘဲချက်ချင်းအရေးယူလာအောင်နှိုးဆွဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ထက်ကြည့်ရှုသူများ၏စိတ်ထဲတွင်နေသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အပေါ်အားကိုး။ သို့သော်တစ်ခုကြော်ငြာဖို့ဆက်စပ်အပိုဆောင်းအကြောင်းအရာမိတ်ဆက်ကြည့်ရှုဖြောင့်ကွယ်ပျောက်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုခလုတ်ကို၏စာနယ်ဇင်းမှာ screen ပေါ်မှာကြော်ငြာတစ်ခုကားစမ်းသပ် drive ကိုဘွတ်ကင်ဖို့ option ကိုမိတ်ဆက်နေဖြင့်ပွိုင့်များတွင်သေးသောအခြားအမှုပေးသည်။ ကြော်ငြာရှင်များကဤလမ်းအတွက်စားသုံးသူနှင့်အတူအပြန်အလှန်သူတို့ကို ပို. ပို. ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများပူဇော်ရန်အဘို့အလက်နက်ဖြစ်၏အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
5 ။ Incentivized Advertising ကြော်ငြာ
ကြည့်ရှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်၏နောက်ထပ်နည်းလမ်းထိုကဲ့သို့သောသော့ခတ်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆုအဖြစ်မက်လုံးပေးကမ်းလှမ်း၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဆုခခြံကိုဗီဒီယိုကြော်ငြာယနေ့ Multichannel ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းစွာသင့်လျော်သည်။ incentivized ကြော်ငြာတစ်ခုမှာဥပမာအားထိုကဲ့သို့သောတက်ဘလက်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းအဖြစ်ကြည့်ရှုအခြားစက်ကိရိယာပေါ်တွင်ရွေးနှုတ်တော်မူလိမ့်နိုငျသောဘောက်ချာကုဒ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်။ လေ့လာရေးဒီနေ့ရဲ့စားသုံးသူအများအပြားသူတို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌အခြားစက်ကိရိယာနှင့်အတူတီဗီကြည့်ရှုကြောင်းပြသ; ဥပမာအားဖြင့်သူတို့ဟာသူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပရိုဂရမ်တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုဘို့မိမိတို့စမတ်ဖုန်းတွစ်တာ browsing နိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကိုသူတို့ချက်ချင်းကြော်ငြာနှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့ဆုလာဘ်တွင်လက်ငင်းငွေချေနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
OTT ၏မြင့်တက်ယှဉ်ပြိုင်မှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုအကြောင်းအရာလောင်ဖို့မျှော်လင့်ထားလမ်းကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နည်းပညာကပြန်ခြေလျင်ထုတ်လွှင့်ထားရှိထားပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ Next ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတီဗီများ၏ကြီးမားသောအလားအလာမူတည်ပြီးနိုင်လျှင်သူတို့ကောင်းစွာ OTT ကစားသမားအနေဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ချွတ်ကာမိမိဘာသာအားကိုးထားရှိပါလိမ့်မည် အဖြစ်ကအခြားအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီများသည်။ ထိုသို့သောအားဖြင့်အရေးယူထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အားပေးသူတို့ရဲ့အလားအလာတိုးတက်အောင် - သူတို့တစ်တွေ Multichannel နှင့်လျာထားသောလမ်းအတွက်ကြည့်ရှုပစ်မှတ်ထား, ဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ဦးချင်းစီဦးစားပေးနှင့်အရသာသူတို့ရဲ့ကြော်ငြာတွေလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကြော်ငြာရှင်များအားဖွင့်ပါလိမ့်မည်အားဖြင့်စေးကပ်တိုးတက်စေရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်သာ။ အဆိုပါ ATSC 3.0 တော်လှန်ရေးလက်ခံထုတ်လွှင့်သူတို့နောက်ဆုံးမှာကြော်ငြာဝင်ငွေနှင့်၎င်းတို့၏ရေရှည်ရပ်တည်ရေးသေချာပိုမိုထိရောက်သောနှင့်ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းကြည့်ရှုပစ်မှတ်ထားဖို့ tools တွေကိုတစ်ဦးအစဉ်အဆက်အသစ်နှင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောလက်နက်တိုက်များကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
1 အတွက်အသံလွှင့်တီဗီ, ကို Global က်ဘ်ညွှန်းကိန်းဖေဖော်ဝါရီလ 2019, 13 ၏ 2019 နိုင်ငံတော်
2 သင်ကလိပ်စာတီဗီကြော်ငြာ, ကြော်ငြာခေတ်, အောက်တိုဘာလ 24, 2018 အကြောင်းကြားဖူးတယ်အရာအားလုံးယုံကြည်မနေပါနဲ့
3 DTG ဗြိတိန် HbbTV spec, Broadband တီဗီသတင်းများ, 30 စက်တင်ဘာလ 2011 MIC မှခွင့်ပြု
4 လိပ်စာတီဗီမှကျေးဇူးတင်ပါသည်ဘတ်ဂျက်ကွာ Facebook က, Digiday ဇန်နဝါရီလ 24, 2019 ကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့စတင်နေကြသည်
5 Maserati Digiday, မေလ 22, 2018, ကြွယ်ဝသောကားကိုဝယ်တွေ့ရှိရန်ပစ်မှတ်ထားတီဗီကြော်ငြာကြည့်
Greg Jarvis အကြောင်း
Greg အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုင်တီန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတခု Fincons '' အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစေပါတယ်။ အတိတ် 18 နှစ်တွေသူအများအပြား OTT နှင့်တီဗီပေးပို့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သူသည်လက်ရှိတွင် Next ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများဒီဇိုင်းထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုဦးဆောင်ခြင်းနှင့်မကြာသေးမီကတီဗီအင်တာဖေ့စအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဒီဇိုင်းနှင့်ပူးတှဲစာအုပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor OTT SJGolden - လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-06-10
ယခင်: Flash ကိုသိုလှောင်အရမ်းစျေးကြီးသည်ထင်ကြသလော ထပ်ပြီးစဉ်းစား
နောက်တစ်ခု: Flix ကိုက်နောက်ထပ် Huawei ကဗီဒီယိုဥရောပအကြောင်းအရာဗီဒီယိုဖြန့်ဖြူးတိုးချဲ့